ukufakwa Plinth - zakamuva futhi mhlawumbe esigabeni oyithokozela kakhulu ukulungiswa phansi. Uma uthi nhlá, lo msebenzi kungase kubonakale kahle elula. Nokho, ngisho lapha kukhona nobunzima ezingalindelekile. Yikuphi okubalulekile ukhetha? Yini zidinga amathuluzi? Indlela ukwahlukanisa bese ufake plinth phansi?
Izimpendulo zale mibuzo kanye neminye phezu isibonelo plinth plastic Cezar (Poland). Isitayela, ukuma Ububanzi libhala Kulokhu asinasithakazelo. Ake ukugxila tesakhiwo.
Ngokwe-indlela obandayo imikhiqizo phansi kusuka kule nomkhiqizi zihlukaniswe izinhlobo ezimbili: nge ikhebula wesiteshi ngaphandle ( "abayizimpumputhe"). Ukuqinisekisa ongabonakali nenkanuko edlulele plinth abayizimpumputhe, usebenzisa Ukugunda akhethekile glue.
Ukufaka PVC plinth phansi nge ikhebula siteshi, kungekho iziqobosho ezengeziwe azidingeki - nje Imigudu abavamile noma ngezikulufo.
Ukubophela PVC skirting Poland uzodinga:
zabona futhi isigqoko ibhokisi ukusika;
glue ekhethekile (uma umkhiqizo bakhetha uhlobo obandayo base ingcina).
Ukuze abale edingekayo amavidyo square odinga ukukwazi ubukhulu Imininingwane egumbini (ngokuvamile wafingqa ubude zonke izinhlangothi egumbini). Ingabe sisuswe okuholela isamba obuphelele lemigubazi 1-1.5 m futhi eyandisa isitokwe.
Ngaphezu impahla isizinda, kubalulekile ukubala inani emakhoneni zangaphandle, plugs, kubakaki futhi couplings. Isethi oluphelele izesekeli, okuyinto edingekayo ukufaka skirting amabhodi Cezar phansi zingatholakala kusayithi http://disoul.ru/plintus/cezar-elegance.
Ukumaka, ukulungiselela kanye ukufakwa impahla
Isigaba sokuqala - wokugubha. Izindawo zalapho ihlelelwe phansi udonga. Uma phansi kanye izindonga iyashelela, wayibhinca udonsa 40 cm. Uma kungenjalo obandayo kwenziwa kaningi, ikhumbula Ukuhlanekezelwa ekhona izindonga.
Layout plinth kungcono ukuqala kusuka ekhoneni odongeni ende kunazo zonke endlini. indlela enjalo liyakuthela ubuncane ezilahliwe, futhi ngenxa yalokho, ukuze ulondoloze imali ekwakheni izinto. Labo abasele abanga-cut izingcezu ngokuvamile esetshenziselwa unhlangothi ukwesekwa amakholomu, niches futhi ezingxenyeni ezimfushane odongeni.
Isinyathelo sesibili - ukusika amaphrofayli. Slicing plinth Cesar is hhayi Kunconywa ukusebenzisa grinder noma Jigsaw. Kungcono makudle the hacksaw ezivamile - nale cut ithuluzi kuyinto nakakhulu futhi ubeke izinto ngononina.
Isigaba sokugcina - ukufakwa. Omunye kufanele uqale kusuka ekhoneni ngabambelela odongeni ngihamba eside egunjini. Lezi zindawo kuhlelwe kuthiwa yamba izimbobo dowel. Ngesikhathi kwangaphakathi iphrofayela ekhoneni ekulinganisweni (zingabekwa Yesigcilikisha) bese screwed emhlabeni wayibhinca ipherimitha uqobo. Ngemva kokufaka, hawu nokufakwa, nemikhawulo yomhlaba evulekile emnyango ephelele Imigudu.
Njengomthetho, a plinth PVC ineziteshi kweziteshi zethelevishini noma umklamo kuhilela yasibamba ukuba strip noma i-glue. Kukhona futhi kufanele sikhumbule ukuthi emapheshana kufanele zixhunywe odongeni, hhayi phansi.
Ukudweba plasterboard ngezandla zabo: izici, ubuchwepheshe kanye nezincomo
Indlela awuthunqise e-ugwayi: izimiso eziyisisekelo
Push-ups amadolo - indlela elula ukuhlangabezana Chaturanga